ikhaya » Okufumaneka » Ukungeniswa kunye neNtloneko!
Ukungeniswa kunye neNtloneko!
Iilabhu ezintsha zakhiwa. Amaqela abaqulunqi kunye namaqabane asebenzayo asebenzisana. Inani eliqhubekayo lotyalo-mali lithengiweyo, kwaye ukuba le fomu ehambelanayo yeendaba ekhulile yi 3x ukususela kunyaka odlulileyo (2016) yenza inyaniso engathandekiyo kunye neNtlekile njengethikithi elitshisayo. Lona akuyena umzala we-3D ukuhlaziywa okuqhelekileyo okanye i-retro-boom eyathatha abathengi ngesiqhwithi kwi-2003-2010, okanye ukuzalwa kwakhona "kwexesha legolide" kwi-1952-1954 (khumbula uMdali kwi-Black Lagoon). Abaphulaphuli abadala njengesizukulwana X Kunye ne-Baby Boomers khumbula i-hype emva kokufumana isiKhokelo seTV yeTekisi (zeziphi izikhokelo eziza kudlala ngexesha elithile kwiphepha, usuku ngalunye lweveki kunye ne-hype kunye nokuthengiswa kokufumana iiglasi zakho ze-Anaglyph 3D zamaphepha ukuze ukwazi ukubukela Iintambo ze-3D kwigumbi lakho lokuphumula, kwi-CTR yakho ye-TV e-8pm kule ntsuku ezayo ngeCawa. Ngoku, ubungayithatha iiglasi ezibomvu kunye ne-blue lens kwiivenkile ze-Ivory Soap?
Hayi, ukungqiniswanga kunye neNkcazo eyiyo "ngumthi wayo kwihlathi elikhulu leendaba." Yindlela yokusabalalisa ulwazi kunye nokukwazi ukucwilisa abathengi apho bahlala khona okanye okwangoku benzayo. Siyazi oku kusuka kwimizekelo yecala elimalunga nama-watch watch adults malunga nemizuzu ye-50 yevidiyo yedijithali imihla ngemihla, kodwa inyaniso engenakuphikiswa kukuba isiqingatha sexesha ababukeleyo kumadivayisi abo eselula. Zibukela ntoni? Ngaba i-VR okanye i-AR? Ngaba bayasusa loo maglasi ephepha?
"Iteknoloji yefowuni idlulisa indlela abantu abajikeleze ngayo ihlabathi, kunye nokwandisa ukusetshenziswa kweendaba jikelele ... Kunika abanini bemithombo yoluntu ithuba lokufikelela kubantu nakwiindawo abazange bakwazi ukufikelela kuzo ngaphambili, kwaye banike abathengi iindlela ezintsha zokufumana Kwaye ujabulele umxholo onyanzelisayo. " UJonathan Barnard, iNtloko yeNgqungquthela, uZenith, njengoko kucatshulwe ngaye ETBrandEquity.com
Ukuphuhliswa kwe-AR kunye ne-VR kukuphayona kwiNdaba kunye neminye imibutho yezobugcisa ukuba iguqule ukwenza umsebenzi okhoyo wangoku, ophakathi kunye nohlaziyo. Umxholo wevidiyo, ukuzuza kweengeniso, kunye nokukhula kobubukeli yindlela ephakanyisayo ephakanyisiweyo eliye lazisa igama elithi "Ukubambisana." Iminye imizekelo yalokhu i-Guardian iqhagamshelana ne-Vice News ukubonelela ngeengxelo zeendaba rhoqo ngokuhlwa, okanye ukusebenzisana kweConde Nast kunye Vox kunye NBC Ukuphuhliswa kweemveliso ezintsha zentengiso, okanye i-New Yorker ibali eliguqukayo ukusuka kwincwadi yokugcina iifilimu ezifutshane ukuba ziboniswe kwi-Amazon Prime. Ukulungelelaniswa kweendlela ezintsha ze-hybrid zokunika abathengi "ezintathu" zemixholo yeendaba: Ukukhawuleza, Ukuzikhethela kunye nokuHlanganisa * (ukusuka kwi-OOYALA yeSebe lezeMedia 2017).
"Kukhona le fayile yeenkampani zoononophelo ukuzibiza ngokuba yiinkampani zeteknoloji ... Umsebenzi wethu awuyi kuyenza iteknoloji. Umsebenzi wethu kukufumanisa indlela yokusebenzisa ubuchwepheshe. "- Jake Silverstein, uMhleli, iNew York Times Umagazini, njengoko kucatshulwe kwiWired.
Imigaqo yokuvelisa ividyo / i-cinema emva kokuvelisa i-AR okanye i-VR izixhobo ziye zahlala zifanayo ukusuka kwiintsuku zakho kwisikolo sefilimu. Iikhamera zekhamera, ukudweba ngokukhanya, apho ukusetyelwa xa ukukhishwa kwangaphandle emini okanye ngaphakathi ngaphakathi kweefestile kuyisiseko. Nangona kunjalo, elinye iqela elide kwaye lingaphaya kweyona nto ibaluleke kakhulu ukuze kuphumelele kule nsimu yokuvelisa imveliso kukuba: Qinisekisa ukuba isiqwenga sibandakanya abaphulaphuli bakho, ingqiqo yentsusa, kwaye ukwazi kwakho ukuthetha ibali elibonakalayo Uphawu!
Ukungabi nakwiNkcazo engenakunemida, kwaye ngokuqinisekileyo ingabonwa njenge-media agnostic. Iziqendu zinganikwa ngewebhu, ii-VOD, kunye nee-app! Akukufaneki ukuba yi-movie emfutshane, umdlalo wevidiyo okanye iqela leendaba zeendaba zentlalo, okanye ukuthengiswa kwezinto zakutshanje kunye ezinkulu. Kungaba nayiphi na into yokudala efuna ukuba yona. Ubugcisa buzisa umthengi ngakumbi. Ukungabi nakwiNqobo kunye neNtlekile kuya kuba yinto eqhelekileyo kwiminyaka emihlanu ezayo, ngoko ke ngubani ofuna "ukukhokela ipakethi" kwindlela entsha yokuxelela ibali elibonayo elibonakalayo?
UMatthew usebenzile kumacandelo abucala kunye nemfundo ephakamileyo kwiminyaka engaphezu kwemashumi mabini. Uxhomekeke kwimimandla yolawulo lweprojekthi yedijithali, ukusasazwa kwebunjineli kunye nemveliso yemidiya. UMateyu unolwazi olubanzi kwimveliso yeposi yedijithali, ukuphathwa kweefayili yedijithali, ukuveliswa kweefayili yedijithali, kunye nokudibanisa kwezixhobo zokudibanisa. UMnu Harchick uphanda ngokuphandle imeko yezobugcisa bokusasazwa, ukucoca i-digital cinema kunye nobuchwepheshe bokubonwa kwee-audio ukuze kuphunyezwe kwabaxhasi kwaye kuyafumaneka kwiimfuno zakho zokubonisana.
I-Metaliquid yenza i-AI I-Analysis yeVideo - Julayi 10, 2018
Umhlangano weSizwe we-54th SBE Okthoba 2-3 eDanvers, MA - Julayi 9, 2018
I-Spotlight: I-Blackmagic Pocket Cinema Ikhamera 4K - Julayi 6, 2018
ITeknoloji yeTV Inkundla ye-Ultra HD ndiphila	2017-08-01
Previous: I-Sonnet Ivakalisa ukufumaneka kwee-Thunderbolt ze-3 Ukuphucula amakhadi kwi-Thunderbolt I-2-to-PCIe Ukunyuswa kweKhadi Iinkqubo
next: Imibuzo malunga ne-LED Fresnel Cooling?
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso: "Ukungeniswa kweNdleko kunye neNtlonelo!". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/augmented-and-virtually-there/. Enkosi.